Kadib haristii Talyaaniga yaa leh eedaas, maxayse u baahantahay kubada cagta Talyaaniga. Qalinkii AK Caqil.
Tuesday, December 18th, 2018 - 23:08:07
Tuesday November 14, 2017 - 12:53:21 in Wararka by Ak Caqil
Xulka Talyaaniga ee koobka Aduunka ku guuleestay afar jeer ayaa xalay laga reebay inuu soo gaaraa ciyaaraha Aduunka ee lagu qaban doono sanadka dambe bisha June wadanka Russia. Talyaaniga waxaa reebtay dalka Sweden oo kaga adkaatay hal gool iyo eber isku celceliska labadii lugood ee ciyaaraha bug oo baxda ahaa ee lagu kala saaraaye dalalka qaaradaan Yurub si loo buuxiyaa tirada loo ogolaa reer Yurub. Xiddigaha ay ka midka ahaayeen Buffon, De Rossi iyo Barzagli oo ka mid ahaa haraagii guuleestayaashii Koobkii Aduunka ee 2006-dii iyo Chiellini oo ka mid ahaa xiddigihii badalay guuleesteyaashii Koobka Aduunkii 2006-dii ayaa iskaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah kadib guuldaradii la yaabka laheed ee Sweden balse su’aasha ayaa ah yaa leh eeda ka harista Talaayaaniga.
· Ugu horeen Talyaaniga inay ka haraan waxaa loo sababeeye macalinka xulka Talyaaniga ee Gianpeiro Ventura kaas oo ku guuldareestay ugu horeen inuu dabada u qabtaa xulkii cabsida laga qabay oo dirqiga kaga haray Koobkii Euro 2016-kii wareegiisa sideed dhamaadka kadib rigooreyaal la isku xiiqay oo ay Germany ku reebeen ee uu watay macalinka juhdiga badan ku bixiye xulka ee Antonio Conte. Talyaaniga waxaa ay ku eedeeyeen macalinkii hore ee Torino inuusan heeysan qibrad uu ku hogaamiyaa qaranka Talyaaniga balse eeda kaligiis ma lahan ee ninkii asiga doortay ayaa leh sida ay ila tahay. Gudoomiyaha xiriirka kubada cagta Talyaaniga Carlo Tavecchio ayaa ninka leh musuuliyada in qaranka Talyaaniga ka haraan maadama uu doortay macalin guushiisa ugu weyn ay aheed in Torino uu keenay Koobka Uefa Europa League iyo inuu Serie D iyo Serie C uu ku guuleestay inuu Kooxo ka soo saaraa. Talyaaniga inuu haraa waxaa ay la noqotay guud ahaan dunida kubada cagta wax lala yaabo balse dadka Talyaaniga ah lama noqon wax aysan fileeynin maadama ay ogaayeen cida majaraha u heeyso Kubada Cagta Talyaaniga.
· Talyaaniga sooma saarin xiddigo ku filan inay sii qabtaan hoowshii ay ka tageen xiddigihii waa weynaa ee Talyaaniga tan iyo 2006-dii markii ay qaadeen Koobkii Aduunka. Xulka Talyaaniga ee ciyaaray ciyaarahii Euro 2008-kii ayaa ahaa inta badan xiddigihii ku guuleestay Koobkii Aduunka ee 2 sano ka hor markaas lagu qabtay Germany waxaana Talyaaniga la tusay inuusan xulkooda wali sameeynin wax horumar ah kadib markii ay si nasiib ah kaga soo baxeen Group ay ku wada jireen xulkii ay qaadeen Koobkii Aduunka ee France, Holland iyo Romania. Talyaaniga ayaa aruusaday 4 dhibcood oo kaliyah waxaaana ay ka adkaadeen Xulka France oo ay 2-0 ku dileen guud ahaan ciyaarihii ay ciyaareen ayadoo kulankii Romania uu nasiibka saaciday kadib markii Adrian Mutu uu qasaariye rigoore ciyaar 0-0 ku soo idlaatay oo Talyaaniga laga gacan sareeye waxaana ay guuldaro 3-0 kala kulmeen dalka Holland. Spain oo koobka qaaday ayaa reebtay ciyaar ay Talyaaniga 120-kii daqiiqo la ciyaaray iska joogeen goolkooda hortiisa waloow rigooreyaal lagu dubtay. Waxaan taariikhdaas u soo qaatay Talyaaniga inuusan soo saarin wax ciyaartooy cusub ah oo la jaanqada kubada cagta hore u martay Talyaaniga guud ahaan waxaa la xasuustaa inay xulkooda wax World Class ah ay ka soo saareen Leanardo Bonucci iyo Verratti tan iyo 2008-dii kuwaas oo qaranka ugu horeeysay 2012-kii kadib. Talyaaniga waxaa la xasuustaa in 1998-dii ay Koobka Aduunka markii ay soo baxeen ay heesteen xiddigaha Vieri, Del-Piero, Baggio, Inzaghi iyo Enrico Chiesa. Hada waxaa Talyaaniga weerarkooda ahaa Ciro Immobile iyo Manolo Gabbiandini. 1998-dii markii uu Casere Maldini uu soo xulanaaye xulkii Talyaaniga uu gurigooda uga so tagay Zola, Roberto Mancini, Francesco Totti, Giuseppe Signori, Fabrizio Ravanelli, Vincenzo Montella, Pierluigi Casiraghi iyo Paolo Di Canio markii aad fiirisaa awoodooda iyo kuwa maanta ciyaaraaye waxaa dareemeeysaa in kubada cagta Talyaaniga aysan soo saarin badalkii xiddigihii ku guuleestay koobkii Aduunka 2006-dii oo kale ama kuwii ciyaaray Koobkii Aduunka 1994 iyo 1998-kii.
· Ma ogtahay in Koox Talyaaniga ka socotaa aysan qaadin Koobka labaad ee yurub ee Uefa Cup oo hada loo bixiye Europa League tan iyo 1999-kii oo ay qaaday Kooxdii Parma ee awooda laheed berri samaadkii. Talyaaniga koox ka socotaa meeysan qaadin Champions League tan iyo sanadkii 2010-kii markaas oo ay qaaday Kooxdii Jose Mourinho balse ma uusan ciyaarin laacib Talyaani ah finalkii marka laga soo tagaa Marco Matarazzi oo helay 2 daqiiqo oo kaliyah inuu ciyaaray kulankaas. Guud ahaan ciyaartooydii uu Mourinho Madrid ula safartay kulankaas ayaa Toldo, Balotelli iyo Matarazzi wax Talyaani ah. Isku soo duubee kubada cagta Talyaaniga waxaa ay baahan tahay xiddigo tayo sare leh iyo isbadal maamulada Kooxaha lagu sameeyo.
Kubada cagta Talyaaniga ayaa u baahan si guud in loogu sameeyaa isbadal dhanka maamulka xiriirka kubada cagta ah waa inay ka bartaan Germany kacdoonkii ay sameeyeen kadib Koobkii Aduunka ee 2006-dii kadib. Talyaaniga haku dareen maamulka xiddigihii hore ee Maldini, Albertini iyo Cannavaro maamulka sare ee xiriirka. Kooxaha ha siiyeen fursad badan caruurta ka soo baxdo xerooyinkooda Milan ayaana ah tusaale wanaagsan halka Roma iyo Juventus ay qaataan ciyaartooyda tyada leh ee Talyaaniga. Gunaanadka warkeeyga ayaa ah eeda ugu weyn waxaa leh Xiriirkii doortay in Gianpiero Ventura uu hogaamiyaa xulka Talyaaniga asiga oo aan laheen qibrad xitaa gaarsiisan Champions League xitaa iska daa koobab uu qaadaayee. Tani waa tusaale ku filan kubada cagta Talyaaniga oo maanta taagan meeshii ugu hoseeysay.